तिथि मेरो पत्रु » छ लाल झण्डा पहिलो तिथि मा हाजिर गर्न
छ लाल झण्डा पहिलो तिथि मा हाजिर गर्न
यो पहिलो तारीख गर्न आउँदा, यो वरपर विशाल दबाब हुन सक्छ. के लगाउने गर्न, कहाँ जाने र पनि के कुरा गर्न. यो सबै एक बिट भारी हुन सक्छ. तथापि, तपाईं पहिलो तारीख मा को लागि खोज हुनुपर्छ केही धेरै महत्त्वपूर्ण व्यवहार छन्. म खूंखार रातो झण्डा चेतावनी संकेत कुरा गर्दै छु.
यो पहिलो मिति मा भयातुर हुन बुझन छ, त्यसैले म तिमीलाई हरेक वाक्य र आन्दोलन आफ्नो मिति बनावट विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छु, तर को खोज मा हुन केही ठूलो सम्झौता तोडने छन्.
दिनांक समयमा टेक्स्ट
म अब हामी एक प्रविधी भारी समाजमा बाँच्न बुझ्न, तर अझै दूर फोन राखे. मिति समयमा टेक्स्ट बस यस्तो रुखो व्यवहारले छ. कुनै कुराले तिनीहरूले आफ्नो मिति समयमा खोल्नको भन्दा सुन्न पनि uninteresting हो जस्तै कसैले महसुस. आफ्नो मित्रहरुलाई तपाईंको पदहरू केही घन्टा प्रतीक्षा गर्न सक्छन्. त्यसैले तपाईं पहिलो मिति लागि टाउको जब, मौन मा आफ्नो फोन राखे र मिति को बाँकी लागि आफ्नो खल्ती अथवा थैली मा छोड. तिनीहरूले पहिलो मिति मा अलग आफ्नो फोन सेट गर्न असमर्थ छन् भने, सम्भवतः भन्दा बढी उनि तल आफ्नो फोन सेट कहिल्यै.
पनि यौन आक्रामक
खिलवाड को आदी भएर यौन explicated भइरहेको भिन्नता छ. केही निर्दोष टिप्पणी बनाउने राम्रो छ (यस्तो छोटकरीमा आफ्नो संगठन वा उपस्थिति पूरक रूपमा), तर तिनीहरूले थाल्नुभयो भने बढी अश्लील टिप्पणी गर्न, तपाईं आफ्नो मिति reevaluate गर्नुपर्छ. हरेक पूरित गर्न प्रेम, तथापि कसैले आफ्नो खुट्टा टटोलना र तिनीहरूले तपाईं घर लैजान चाहन्छन् कसरी नराम्रो भन्न भएको बस असहज छ. तपाईं एक दीर्घकालिक सम्बन्ध देख रहे भने, के तपाईं चिन्न प्रयास र बस ओछ्यानमा मा तपाईं रही मा केन्द्रित छैन, जो एक मिति चाहनुहुन्छ.
मिति बस शुरू छ भने यो एक राम्रो संकेत कहिल्यै हो र त्यो / त्यो पहिले नै तपाईं आलोचना छ. उदाहरण: तपाईं बस जिम आइपुगेका यस मिति सूचित र त्यहाँ प्रतिक्रिया ओह "जस्तै कुरा हो भने, एक व्यक्ति यति आफ्नो प्रकारको. कुल जिम मुसा?तपाईं आफ्नो मिति पूरा गर्न आएका बेला "वा तिनीहरूले तपाईं लगाएका के आलोचना. तिनीहरूले प्रारम्भिक तपाईं यस आलोचना गर्दै भने, यो नमुना लामो हुनेछ र आफ्नो छनौट सधैं आलोचक हुनेछ संभावना छ.
आफैलाई बारेमा कुरा तरिका, बढ्ता
एक राम्रो कुराकानी सामान्यतया उत्तिकै साझा आदानप्रदान हुन्छन्. तपाईं वा तपाईंको मिति लजालु छ भने कहाँ समयमा पनि छन्, तपाईं दुई अधिक बहिर्गमन एक कुराकानी बढी पूरा गर्नेछ, जो राम्रो छ. तथापि, मिति मुख्यतया एक-पक्षीय कुराकानी छ भने, जहाँ आफ्नो मिति निरन्तर आफूलाई बारेमा, यो एक बिट थकाऊ हुन्छ. झनै, तिनीहरूले तपाईं नष्ट गर्दा जब तपाईं आफूलाई बारेमा थप कुरा गर्न बताउँदै छन्. एक मिति प्रत्येक अन्य अझ बढी सिक्न र तपाईं जडान कसरी देख्न मौका छ, तपाईं कसरी अद्भुत र सिद्ध बारेमा एक स्वगत लागि एक मौका.
कार्य र रहन अवस्था
म बेरोजगार-अर्थव्यवस्था घरमा बस्ने र छ जो एक व्यक्ति संग डेट मा जान भन्दै नगरेको यी दिन कठिन छ, यो बुझ्न सक्छौं छ. तिनीहरूले वर्ष लागि स्थिर आय थियो र आफ्नो आमाबाबुको घर मा आफ्नो जीवन व्यवस्था संग पनि सहज एक सानो लाग्न छैन भने, सायद तपाईं मा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ. तिनीहरूले एक जीवित लागि के ठीक के तपाईं बताउन असमर्थ छन् भने तपाईं पनि चिन्ता गर्नुपर्छ. के तपाईं आफ्नो मिति बताउन असमर्थ छन् भन्ने आफ्नो काम को बारे मा यति गुपचुप छ? तपाईं जवाफ जान्न चाहन्छु छैन सक्छ…
यो एक स्पष्ट लाग्न सक्छ (पहिलो मिति अघिल्लो सम्बन्ध छलफल गर्न एक महान समय कहिल्यै छ रूपमा), तिनीहरूले आफ्नो पूर्व ल्याउन भने, तिनीहरूले कुरा कसरी ध्यान. तिनीहरूले बस संक्षिप्त तिनीहरूलाई उल्लेख यदि यो ठीक छ, तिनीहरूले एक मनोवैज्ञानिक उनि के तपाईं बताउन र यदि तर कति तिनीहरूले घृणा, तपाईं साँच्चै दोस्रो मिति योजना हुँदैन. आफ्नो पछिल्लो साझेदार बारेमा आक्रामक वा कृपालु भाषणको कुनै प्रकारको तिनीहरूले प्रस्टै सम्बन्ध मा गए छैन भनेर देखाउँछ या उनि सिर्फ तीतो र क्रूर छन् कि, जो मामला मा यो तपाईं तिनीहरूलाई देखेर जारी छैन सबै भन्दा राम्रो लागि हो.